Vee24: Ny fampiroboroboana horonantsary mivantana dia mampitombo ny fiovam-po amin'ny 38% | Martech Zone
Asabotsy, Jona 18, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tamin'ity herinandro ity, nanana traikefa nahafinaritra indrindra aho tamin'ny fampisehoana izany Vee24vahaolana video an-tserasera ho an'ny tranonkala. Ny orinasa dia manodidina ny taona vitsivitsy nanatontosa fitaovana sy rindrambaiko mitambatra ho vahaolana amin'ny serivisy izay takatry ny saina tokoa.
Inona Vee24 zava-bita tsy mahagaga. Rehefa manasonia anao ny mpanjifa dia mividy ny fitaovana am-boalohany izy ireo, izay misy tilikambo misy fakan-tsarimihetsika, jiro eo aloha, mpanara-maso ary na jiro eny amin'ny rivotra aza. Ny solosaina dia mpanara-maso efijery 24 ″ mihazakazaka Windows 7 sy ny fampiharana Vee24.
Tsy misokatra fotsiny ilay rindrambaiko ary manomboka horonan-tsary. Mipoitra div mahafinaritra manome anao hiresaka amin'ilay olona any amin'ny farany ilany. Ny pop-up dia afaka manomboka ny solontena, manomboka azy ho azy, na ny mpampiasa dia afaka manindry tab tsara eo amin'ny sisin'ny efijery hanombohana azy.
Raha manaiky ny fanasana ilay mpampiasa dia mampifandray anao amin'ilay solontena ilay rindrambaiko. Mifanaraka amin'ny fisokafan'ny chat video (azonao atao ny mampandeha ny fakantsarinao ihany koa, ny solontena dia afaka mahita ny pitsopitsony rehetra amin'ny browser-nao (Operating System, Browser, sns.) Ary na ny pejy misy refy mitovy aza. Afaka mamindra ny varavarankelyo koa izy ireo ny fomba hanomezana anao trano sy tany farany ambony.
Angamba ny singa mahavariana indrindra dia ny hoe Vee24 dia manana fizarana fizarana ihany koa - mamela ireo antontan-taratasy, powerpoints na rakitra hafa hosokafana sy zaraina. Tsy vitan'ny fizarana azy… fa afaka mifanerasera miaraka amin'ilay solontena ianao. Ny CEO CEO Andy Henshaw dia nitety ahy tamin'ny famandrihana fialan-tsasatra tamina tranonkala iray hafa… mahatalanjona ny zavatra niainana, tsy ho mora kokoa izany. Samy afaka nanova ny takelaka tamin'ny pejy iray ihany izahay roa, niaraka tamin'ny nanolorana azy!
Ny vokatra ho an'ny mpanjifan'ny Vee24 dia efa nahagaga… ny orinasa toa an'i Ford, Lexus, Lands 'End, Mini Couper, Heels.com ary orinasa an-jatony maro hafa dia mahita Fiakarana 38% amin'ny tahan'ny fiovam-po. Ny valin-kafatra ho an'ny mpanjifa momba ny rafitra dia efa tsy teo amin'ny tabilao ihany koa.
Ity misy fampisehoana video an'ny Vee24 ao amin'ny Internet World:
Na dia maro amin'ny valiny eo noho eo aza no jerena amin'ny antsinjarany, tsy azoko an-tsaina hoe inona no azon'ny fampiasam-bola amin'ny rindrambaiko toy izao ho an'ny fitazonana ny mpanjifa ao amin'ny Software as a Service company. Ny fahafaha-mifankahita sy mizara efijery dia hahatonga ny serivisy ho an'ny mpanjifa ho mora fa tsy ny nofy ratsy ankehitriny! Toa tsy ny mpitarika fotsiny eo amin'ity indostria ity ny Vee24, fa izy ireo ihany no orinasa manolotra an'ity serivisy ity. Tsy isalasalana fa hahita fahombiazana lehibe izy ireo! Izahay dia efa mikapoka azy ireo amin'ny fifandraisan-davitra.
Aza adino ny mampahafantatra azy ireo fa nahalala ny serivisy ianao tamin'ny alàlan'ny Martech Zone!
Jun 20, 2011 ao amin'ny 1: 44 PM
Amin'ny vee24: tsy nifanaraka bebe kokoa. Izahay dia mampiasa ny suite vee24 ho an'ny mpanjifa vitsivitsy ao amin'ny tsena alemana ary mahafinaritra izany. Fa ny tena zava-dehibe toy ny teknolojia ihany: manampy ny mpanjifanay hitondra fiara izy io. Raha ny fahitako azy io dia iray amin'ireo fomba mahomby indrindra hamoronana fitarihana sy fivarotana mitombo amin'ny Internet!